That's so good, right?: Boy Love
Nyi Zaw’s POV:
သူ့မိဘတွေကို သယ်ဆောင်သွားတဲ့ ကားလေးကို အတူရပ်ကြည့်နေရင်း သူနာကျင်ခံစားနေရတဲ့ ခွဲခွာမှုအပေါ် ကျွန်တော်လည်း ထပ်တူခံစားမိပါတယ် နာကျင်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းတော့မသိဘူး သူခံစားနေရတဲ့ နာကျင် ကြေကွဲမှုကို ကျွန်တော် ခံစားနိုင်နေခဲ့တာ။ ကျွန်တော် သူနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ရော ဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေတာများလား။ သူ့ကိုဆိုရင် ကျွန်တော် ကာကွယ်ပေးချင်တယ် ဖေးမချင်တယ် စောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကအလိုလိုရှိနေ ပြီးသားပါ။ သူဝမ်းသာနေရင်လည်း အလိုလို စိတ်ထဲက အူလှိုက်သည်းလှိုက်ပျော်ရွှင်မိရသလို သူနာကျင်ကြေကွဲနေတဲ့အခါ များ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ အလိုလိုပြိုလဲနေတတ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် သဘောထားဘယ်လိုတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ရှာဖွေမတွေ့ခင်ကတည်းက နှစ်ဦးသားက အကြောင်းသိလူတွေဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင် ဟိုဘက်အိမ်က ကောင်ကလေး တစ်ယောက်၊ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေထဲကမှ ကျွန်တော့်အတွက် အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့သား…ဟုတ်တယ် တစ်နေ့သောရက် သူလာသောအချိန်မှာတော့ ပြောခဲ့တာတွေအားလုံး တစ်မျိုးပြောင်းလဲကုန် ပါရဲ့။
‘ညီဇော်..’ သူအမြဲတမ်းလိုလို ကျွန်တော့်နာမည်ရင်းကိုပဲခေါ်တတ်တယ်။
‘ပြော…အောင်အောင်….မင်း ဘာတွေလိုအပ်နေလို့လဲ အခု?’
‘ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ငါအခုအချိန်ဘာမှမလိုအပ်ဘူး ဘာမှမလုပ်ချင်သလိုဖြစ်နေတယ်၊ မင်း ငါနဲ့အတူအပြင်သွားတာ လိုက်ချင်လားလို့’
‘အာ…ကျောင်းစာကြည့်တိုက်က စာအုပ်တွေနက်ဖြန် နောက်ဆုံးအပ်ရမှာရယ် Assignment တွေတင်ရမယ်ဆိုတာကို မေ့နေပြီလားကွ’
‘ငါသတိရပါတယ်ကွာ….ဘယ်သူက Shakespeare စာအုပ်အထူကြီးကို လိုအပ်မှာလဲလောလောဆယ်၊ လာပါကွ ငါနဲ့အတူ အပြင်သွားရအောင် လိုက်ခဲ့စမ်းပါ’
‘Assignment တွေ အပြန်ကျရင် လက်စသပ်တော့မှာပါကွာ…ပြီးတော့မယ်’
အ၀တ်အစားလဲပြီး သူ့နောက်ကိုကျွန်တော် လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်က ထွက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲ ဟိုသည် သွားလိုက်ကြတာ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ ကလပ်တစ်ခုမှာ ရပ်လိုက်ကြပါတယ်။ အိ…..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ခါမှ မသွားဖူးသော ဂေးကလပ်တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
‘အောင်အောင် ငါတို့ ဘာလို့ဒီနေရာကိုလာတာလဲ ဟင်?’
ကျွန်တော်တို့ကလပ်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်တော့ မြောက်များစွာသော အရောင်များဖြင့် အလင်းရောင်တွေကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီနေရာက ဖွင့်ထားတဲ့ဂီတသံတွေက မိုက်သလို အကကြမ်းပြင်ကလည်း အကြီးကြီးပဲဗျ။
‘အိုကေ? မင်းတွေ့ပြီးပြီပဲ လာ ကစို့’
‘မင်းဘာလို့ တွန့်ဆုတ် တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေတာလဲဟ…ဘယ်ကောင်တွေမင်းကို ထိုးမှာမို့လဲ?’ ကျွန်တော့်ကပုံကိုအားမရ သလိုနဲ့ သူလှမ်းပြောပြီး ကျွန်တော့်အနားကိုတိုးကပ်လာပါတယ်။
သူ ကျွန်တော့်အနားမှာ ကတာ ခဏကြာပြီးနောက် ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီငုံ့ကိုင်းလာကာ နှုတ်ခမ်းအစုံကိုနမ်းခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ ကျွန်တော် တကယ့်ကိုအံ့အားသင့်ကာ ရှော့ခ်ဖြစ်သွားရပေမယ့် နုညံ့ပြီး စိုစွတ်သောအတွေ့မှာသာယာပြီး ပြန်လည်နမ်းရှိုက်မိရော။
အနမ်းကျောရှည်ကို ရပ်တန့်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်အခန်းကိုပြန်ကြပြီး စကားစမြည်ပြောကြဖို့သူ့ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါ တယ်။ နှစ်ဦးသား ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရောက်တော့ ကျွန်တော့်အခန်းကိုတန်းဝင် တံခါးကိုလော့ခ်ျချပစ်ကာ ပိတ်ပစ် လိုက်ပါရဲ့။
‘မင်း ဘာကြောင့် ငါ့ကိုနမ်းတာလဲ အောင်အောင်’ ကျွန်တော် သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။
‘အာ…မင်း နမ်းချင်နေတယ်လို့ ထင်လို့ပေါ့ကွာ’
‘အင်…တွေးတော့တွေးမိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဘာ့ကြောင့်?’
‘ငါ…ငါ မင်းကိုကြိုက်လို့ ညီဇော်’ သူ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ရင်း ပခုံးပေါ်ကိုမျက်နှာအပ်လိုက်ကာ စတင်ငိုရှိုက်ပါတယ်။ သူ့ခံစားချက်တွေ မြင့်တက်လာလို့ငိုသလားမသိပေမဲ့ ကျွန်တော် သူ့ကို ရင်ခွင်ထဲထွေးဖက် လိုက်တာပေါ့။
‘အဆင်ပြေတယ် ….အိုကေ…အိုကေ…ငါလည်းမင်းကို သဘောကျပါတယ်ကွာ’
နောက်တော့ ကျွန်တော် သူ့မေးဖျားလေးကိုမကာ နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ တပ်မက်မွတ်သိပ်စွာပေါ့။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာ သူသိစေချင်ပါတယ်လေ။
‘မင်း…..ဒီ…အာ ဘာလုပ်ကြမလဲဟင် အောင်အောင်?’
‘ငါလည်း မသိဘူးလေ…ငါသိတာကတော့ မင်းဘာလုပ်ချင်တယ် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုပဲ အာရုံစိုက် ဂရုစိုက်ချင်တော့ တယ်’
ကျွန်တော် သူ့ကို တပ်မက်မွက်သိပ်စွာ အနမ်းပေးမိပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ့ကိုအိပ်ယာပေါ် အသာအယာလှဲလျောင်း စေရင်း သူ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါရဲ့။ သူကလည်းအလိုက်သင့်လှဲလျောင်းလိုက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို ကျွန်တော့် လျှာတွေနဲ့ ဖွေရှာခြင်းကိုခွင့်ပြုတယ်။ ကျွန်တော့်လက်အစုံကို ဇယ်တောက်သလို ခပ်သွက်သွက် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ် ဖြတ်သန်းပစ်စေလိုက်တော့တာပါပဲ။ သူဝတ်ထားတဲ့ shirt တွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်စဉ်မှာ ကြယ်သီး တစ်လုံးဖြုတ် သူ့ဗိုက် သူ့ရင်အုပ်ကိုတစ်ချက်နမ်း….ကြယ်သီးတစ်လုံးဖြုတ် သူ့ဗိုက်သားဖြူဖြူလေးကိုနမ်းနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကိုနမ်းပစ်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ ရင်အုပ်ကနေ ဆီးစပ်အထိ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အမွှေးနုလေးတွေ တလျောက် ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေး နှာသီးဖျားလေးနဲ့ပွတ်သပ်လိုက်ကာ သူ့ကိုယ်အောက်ပိုင်းဆီကို ကျွန်တော်ရွှေ့လျား လိုက်ပါရဲ့။
ကျွန်တော် သူ့ဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ဖို့လက်ကိုအလှမ်း မျက်ဝန်းတွေကို ကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့စိတ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက ကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဘောင်းဘီရှည်ကိုလျောချွတ် လိုက်တော့ မမာ့တမာ သူ့ငပဲက ၀တ်ထားသော သူ့ boxer ဘောင်းဘီ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ကိုဖြစ်လို့ပါ။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲခေါင်းလေးကို လျာဖျားလေးနဲ့ ပွတ်သပ်ဝေ့၀ိုက်လိုက်ပြန်တော့ တဖြည်းဖြည်းခေါင်းထောင်လာတာကြောင့် ခံတွင်း ထဲကို တစ်ဝက်လောက်အထိ သွင်းလိုက်ပါတယ် အသာအယာပေါ့။ အဆုံးထိမသွင်းဖြစ်ဘဲ အသာဆက်ပြီး တပြွတ်ပြွတ် စုပ်နေပြန်တော့ သူ့ခြေဖျားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်တဲ့အထိ လှုပ်ရှားလာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မသိသလိုနဲ့ဆက် လက်စုပ်နေဖြစ်တာ သူ့ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်ဖို့ အရည်ကြည်တွေစို့လာတဲ့အထိပါပဲ။
ကျွန်တော် သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို နောက်တစ်ကြီပြန်လည်းနမ်းရှိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ရင်ထဲလှိုက်ဖိုမောလျစွာ နှစ်သိမ့်ကြည်နူးတဲ့ အနမ်းလေပါပဲ။ သူ့နှာသီးဖျားက လေပူနွေးနွေးလေးတွေကိုလည်း ခံစားရတယ် တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေတဲ့ သူ့နှလုံးခုန်သံကို လည်း ပိုကြားရတယ်။ လက်အစုံနဲ့ပြန်လည်ထွေးဖက်လိုဟန်ရှိတဲ့ သူ့စိတ်အစဉ်ကိုလည်း သဘောတွေ့ရတယ်လေ။
‘ကိုယ် မင်းနဲ့ချစ်ပွဲဝင်ချင်တယ်ကွာ အဆင်ပြေပါ့မလား?’
သူခေါင်းငြိမ့်ပြရုံလေးပဲငြိမ့်ပြတယ် မျက်နှာမှာ ပန်းသွေးရောင်တွေသန်းရင်းနဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော် ခုတင်ဘေး စားပွဲပုအံဆွဲ လေးထဲက ကွန်ဒုံးတစ်ခုနဲ့အတူ ချောဆီဘူးကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို ချောဆီခပ်ရွှဲရွှဲ လူးလိုက်ပြီးနောက် သူ့ခရေ၀ထဲကို တချောင်းချင်း အထုတ်အသွင်းညင်သာစွာပြုလုပ်ကြည့်တာပေါ့။ အစပိုင်းတော့ တွန့်လိုက်ပေမယ့် ခဏနေတော့ ဘာမှတုန့်ပြန်မှုမပေးတာကြောင့် လက်ချောင်း တစ်ချောင်း ပြီးတော့ နောက်တစ်ချောင်း ပြီးတော့ နောက်တစ်ချောင်း။ လက်ချောင်း သုံးချောင်းလောက် အဆင်ပြေပြေ အထုတ်အသွင်းပြုလို့လာချိန်မှာတော့ လက်ချောင်းတွေကို သူ့ခရေ၀ကနေ ဖယ်လိုက်ကာ ကွန်ဒုံးစွပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ငါးပဲခေါင်းကို သွေးတိုးစမ်းပြီး တဖြည်းဖြည်း ဖိသွင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
သူ့ခြေချောင်းနှစ်ဖက်ကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ထားတဲ့အနေအထားဆိုတော့ တရွရွဖြစ်နေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ကျွန်တော် ငုံ့ကိုင်းပြီးနမ်းဖို့ အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဝက်လောက်ထိဖိသွင်းထားတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲအခြေအနေကို သူ့ကိုမေးတော့ အိုကေလို့ပြောတာကြောင့် စောင်းဆိုင်းနေတဲ့ သူ့ခရေ၀ထဲကု ပိုမိုဖိသွင်းချလိုက်ပြန်ရော။ နာကျင်မှုကြောင့်သူ လှုပ်ရမ်း သွားတော့ ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မကြိုးစားဘဲ ခဏငြိမ်လိုက်ကာ သူချိန်ညှိလို့အဆင်ပြေပြီး ရပြီလို့ဆိုမှ ကျွန်တော် ဆက်လက် ထုတ်သွင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ရှည်လျားလှသော ကျွန်တော့်ငပဲဟာ သူ့ခရေ၀ထဲ တဆုံးမြုပ် ကရောပဲ။
နောက်တော့ ကျွန်တော် ခပ်နှေးနှေး rhythm ကျကျမွတ်သိပ်စွာ စတင်လှုပ်ရှားပါတယ်။ သူ့ဘက်က တက်မက်စွာ တန့်ပြန်မှု လှိုက်မောမှုတွေပါလာတော့ အရှိန်ကို တိုးမြှင့်လိုက်ပြီး ခက်သွက်သွက် ကစားရတော့တာပေါ့။ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်မိတဲ့ ကျွန်တော် အသက်ရှူတွေ ပိုမြန်လာရသလို ရှုံ့ပွရှုံ့ပွလုပ်တဲ့ သူ့ခရေ၀ရဲ့အစွမ်းကြောင့် ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်ချင်လာပါတယ်။ အကြိမ်ရေ ခပ်များများလေး အထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကိုကြုံ့ကာ ငပဲကိုအဆုံးထိဖိသွင်းလိုက်ရင်း သုက်ရည် တွေကို သူ့ကိုယ်တွင်းထဲ ပစ်သွင်းလိုက်ပါရဲ့။ ဒါကို သူပျော်ရွှင်ကြေနပ်ကြောင်း သူ့ငပဲကနေ သုက်ရည်တွေ ဒုံးပျံပစ်သလို ဗိုက်သား တွေ ရင်အုပ်တွေရွှဲစိုသွားအောင် ပစ်ပြလိုက်ရင်း သက်သေထူပါတယ်။
ခဏတာ ကျင်းစိမ်ထားပြီးနောက်မှာတော့ တဖြည်းဖြည်းပျော့လာတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီးနောက် တဘက်တစ်ထည်ကိုယူ သူ့ကိုယ်ပေါ်က သုက်ရည်တွေကို အသာသုတ်သိမ်းပေးပြီးနောက် ရေချိုးခန်းစီ လှမ်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အိပ်ရာစီပြန်ရောက်တော့ သူခမျာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေပါပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်တော် သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို တဘက်နဲ့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်ကာ နံဘေးမှာ ၀င်လှဲလိုက်ရင်း သူ့ကိုယ်လုံးကို ကျွန်တော့်လက်တွေနဲ့ရစ်နှောင်တွယ်ပတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော်လည်းပဲ အိပ်ပျော်သွားရ ပါတယ်။
‘Sweet Dream Baby…’
Aung Aung’s POV:
ကျွန်တော် မိန်းမောတွေဝေမှုတစ်ခုနဲ့အတူ နိုးထလာမိပါတယ်။ ရစ်ပတ်ထားသော ညီဇော်ရဲ့လက်မောင်းတွေကြား သူ့အိပ်ရာပေါ်မှာ လှဲလျောင်းရင်းပေါ့။
‘ဒီ ဒီလို ကိစ္စမျိုးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားရတာလဲ?’ ကျွန်တော်သိချင်မိပါရဲ့။ ခဏသောအချိန်တစ်ခုမှာတော့ မနေ့ညက ဒီနေရာ ဒီအခန်းထဲ မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလကို မှတ်မိသွားပါတယ်။ ‘Oh Shit!! ငါ ဘာတွေလုပ်ခဲ့မိပြီလဲ?’
သူ ကျွန်တော်အိပ်ရာကနိုးသွားတာကို အာရုံခံစားမိသလားမသိ ကျွန်တော့်ပါးပြင်လေးကို ငြင်ငြင်သာသာအနမ်းပေးတယ် ပြီးတော့ လည်တိုင်လေးကိုလည်း အနမ်းခြွေတယ်။
‘ဟေး..’ ကျွန်တော် သူ့လက်မောင်းတွေကို နေရာမှားရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို တွန်းဖယ်လိုက်မိတယ်။ ‘ဘယ်လိုလဲ ဒီမနက် အဆင်ပြေရဲ့လားဗျာ’
‘အဆင်ပြေပါတယ်….မနေ့ညက တကယ့်ကို ကိုယ့်အတွက် အထူးရှယ်ပဲ…အဲ…ချစ်ကော နေကောင်းရဲ့လား?’ သူက ကျွန်တော့်ပါးပြင်ပေါ်က ပါးချိုင့်လေးကို ညင်ညင်သာသာနမ်းပြီး ကျွန်တော့်လက်ကလေးတွေကို သူ့လက်ကြီးတွေနဲ့အုပ်ကိုင်တယ်။
‘အားလုံး အိုကေပါတယ်….ဒါပေမဲ့ ငါ….အဲ ချစ် ခဏနေအိမ်ပြန်မယ်နော်….ကားနဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့မယ်မဟုတ်လား?’ သူ့လက်ကလေးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်ရင်း စကားပြန်လိုက်တာပေါ့။
‘ဒါပေမဲ့ ချစ်တို့ ရေအရင်ချိုးကြတာပေါ့’
ကျွန်တော်တို့ အိပ်ရာပေါ်ကထ တဘက်ကိုယ်စီခါးမှာပတ်ကာ သူ့ရေချိုးခန်းထဲသွားလိုက်ကြတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ ရေချိုးခန်းထဲ ရောက်ရော သူက ကျွန်တော့်ကို နံရံမှာကျောကပ်သွားအောင် တွန်းဖိလိုက်ရင်း လွတ်ထွက်သွားမှာစိုးရိမ်သည့်အလား ထွေးဖက်ပါတော့ တယ်။ အေးစက်တဲ့ ကျောပြင်က အထိအတွေ့ရယ် သူ့ရဲ့ ပူနွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်က အထိအတွေ့တွေကြောင့် ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံထွက်မိရသလို ကျွန်တော့်ညီဘွားကလည်း စတင်ခေါင်းထောင်လာပါရော။ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်း ခပ်ထူထူတွေကြား နစ်မြုပ်နေတဲ့ထိနမ်းရှိုက်လေတော့ ကျွန်တော့်မှာ ရုန်းထွက်ဖို့ ဒူးတွေယိုင်ကာ အားမရှိတော့ပါဘူး။
သူ့လက်အစုံက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားရဲ့ကိုယ်လုံးတွေကြား ခိုးလုခုလုဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်တာ ပညာသားအရမ်းပါလေတော့ ကျွန်တော့် စိတ်တွေ တဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်လာရာက မနေနိုင်ဘဲ နှုတ်ဖျားက ညည်းညူမိန်းမောသံထွက်မိရပါ တယ်။ သူ ကျွန်တော်လည်တိုင်က အမွှေးနုလေးတွေကိုနမ်းတယ်….ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေ……နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း အောက်ဆင်းသွားကာ ဆီးခုံက အမွှေးတွေစီ နှာခေါင်းကိုအပ်ရင်း နမ်းရှုံ့တာ ရေမွှေးနံ့ရှူနေသည့်အလားပါပဲ။ အဲ့ဒါလည်းပြီးရော ကျွန်တော့်ငပဲကို ကိုင်ကာ သူ့ပါးစပ်တွင်းသွင်းမည့်ဟန်ပြင်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်က သူ့ကို မတ်တပ်ပြန်ရပ်ခိုင်းလိုက်ကာ ဘယ်လို -ုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြမယ်ဆိုပြီး ပရိယာယ်ဆင်လိုက်ရပါတယ်။ ခဏနေက မတ်တပ်ရပ်သူနေရာမှာ သူ ဒူးထောက်ထိုင်နေသူအနေအထားမှာ ကျွန်တော်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာပေါ့နော်။ သူ့ပေါင်တံမှာပေါ်နေတဲ့ ကြွက်သားမြှောင်းတွေ ဆီးစပ်က အမွှေးနုတွေကို ကျွန်တော်နမ်း တယ်။ မမာ့တမာဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော်အသာဆွဲကိုင်လိုက်ကာ ထိပ်ခေါင်းလေးကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ အရည်ကြည်အချို့စို့နေ တာကို အရသာခံမိပါရဲ့။ သူ့ငပဲခေါင်းတစ်ဝိုက်ကိုပဲ ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီး တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက် ငပဲထိပ်ဝလေးက အရည်ကြည်လေး တွေကို လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့တို့ယူလိုက်ပေါ့။ ပြီးတော့ ဗီဒီယိုကားတွေထဲကလို ပညာကုန်သုံးပစ်လိုက်တယ် ပါးစပ်ကြီးနဲ့လေ။ သူ့ မျက်ဝန်းတွေစီ မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကိုပြန်လည်စိုက်ကြည့်ရင်း ပါးစပ်ကလည်း တညည်းညည်းတညူညူနဲ့ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်။
သူပြောသလို ချဉ်းကပ်သွားပြန်တော့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်ကို တစ်ချက်နမ်း….ပြီးတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို မွတ်သိပ်စွာ နမ်းပါတော့တယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို နံရံကိုမျက်နှာမူကာရပ် ခြေထောက်တွေကို ခြဲရပ်ခိုင်းလိုက်ရင်း တင်ကိုနောက်ပစ်ခိုင်းပြီး ပြန်တော့ သူ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သလို ကျွန်တော့်တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖြဲကာ ခရေ၀ကိုနမ်းရှိုက်ပါရော။ ပူနွေးနေတဲ့ သူ့လျှာကြီးကို ထိပ်ဖျားမာအောင် တောင့်ထားသလို ခပ်ဟဟဖြစ်သွားတဲ့ ခရေ၀ထဲ ထိုးထည့်ဖို့လုပ်တယ်။ သူ့ပြုမူချက်တွေကြောင့် အူယားစဖွယ် ခံစားရပြီး ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ပုရွက်ဆိတ်တွေ လမ်းတက်လျှောက်နေတဲ့အတိုင်း ခံစားရပါရဲ့။
ကျွန်တော့်ခရေ၀ တစ်ခုလုံးလည်း သူ့ပါးစပ်ကချောဆီတွေရွှဲရွှဲစိုသွားချိန်မှာတော့ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ မာတောင့်နေသော သူပိုင် ပစ္စည်းကြီး တွင်းစအောင်းပါတော့တယ်။ မနေ့ညကလိုပဲ ကျွန်တော့်မှာ နာကျင်ရပေမယ့် အခုတော့ နည်းနည်းလေးနေတတ်သလို ဖြစ်ရပါပြီ။ သူ့ပစ္စည်းတစ်ခုလုံး အကုန်မြုပ်သွားချိန်မှာတော့ တစ်ချက်ခြင်း တစ်ချက်ခြင်း ဆောင့်ထည့်လိုက် ပြန်နှုတ်လိုက်နဲ့ တကယ့်ကို မွတ်သိပ်တပ်မက်စွာပါပဲ။ သူ့ခါးတွေကို ဇကောဝိုင်းတာ အောက်နားကနေပင့်ပင့်ပြီး တစ်ချက်ခြင်းအထုတ်အသွင်းလုပ်တာများ prostate ကို တိုက်ရိုက်ထိထိနေတော့ ကျွန်တော် ကောင်းကင်ဘုံကို မိန့်မိန့်မူးမူးရောက်ရပါတယ်။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့်ငပဲကို လက်နဲ့ပွတ် သပ်ကြည့်မိတဲ့အချိန်လေးမှာပဲ နံရံအနှံ့ကို ကျွန်တော် သုက်ရည်တွေဖြန်းပက်မိပါရော။ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကြွက်သားတွေက ဖျစ်ညှစ် ဖျစ်ညှစ်လုပ်လိုက်မိတာကြောင့်ထင့်….သူ့ကိုလည်း တန်ပိုအမြင့်ဆုံးရောက်သွားစေကာ လျောကနဲ သူ့ငပဲကြီးကိုအဆုံးဖိထားကာ ကျွန်တော့်ကိုယ်တွင်းဝယ် သုက်ရည်တွေကို အားရပါးရပန်းထည့်ပါတယ်။.
သူ့ဟာကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြန်တော့ ကျွန်တော့်ဂုတ်သားလေးတွေ လည်တိုင်လေးတွေကို နမ်းပြန်တယ်။ ယားလို့သူ့ဘက် မျက်နှာ ပြန်မူလိုက်တော့လည်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို အားရပါးရနမ်းတယ်။ အနမ်းကြာရှည်ပြီးပြန်တော့ ကျွန်တော့်ကိုထွေးဖက်ကာ လက်တွေကို ကျွန်တော့်ခါးမှာရစ်သိုင်းရင်း ငြိမ်နေတယ်။
‘ကို ဒီခံစားနေရတာလေးကို မပျက်စီးစေချင်တော့ဘူးကွာ’ ကျွန်တော် ခပ်တိုးတိုးလေးညည်းပြောပြောမိပါတယ်။ ‘ဒါပေမဲ့ ချစ်တို့နှစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုဖန်ဆင်းရှင်ကများ ဒီလိုတွေ့ဆုံဖြစ်ပျက်မှုမျိုး ဖန်တီးပေးလိုက်ပါလိမ့်နော်’
‘အာ….ကိုယ်တွေကို သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေထက်ပိုတဲ့ ပါတနာဖြစ်သွားစေတာတော့အမှန်ပဲမဟုတ်လား၊ အဲ့ဒါကို ချစ်လိုချင်နေတာပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?’
စကားဆက်မပြောဖြစ်ကြတော့ပါဘူး နံရံကိုကျောမှီထားမိလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူငုံ့ကိုင်းနမ်းရှိုက်ခြင်းဖြင့်သာအဆုံးသပ်ကြပါတယ်။ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန် ဆပ်ပြာတိုက်ချွတ်ပေးရင်း ရေချိုးအ၀တ်လဲလိုက်ကြကာ သူ ကျွန်တော့် အိမ်ကို ချစ်စရာ ဂျာဂွာကားလေးနဲ့လိုက်ပို့ပါရဲ့။
အခန်းရှိရာ လှေကားထစ်တွေကို ခပ်သွက်သွက်တက်ရင်း စိတ်ထဲဖြစ်တည်လာရတာက နက်ဖြန် ဟုတ်တယ် နှစ်ဦးသားတွေ့ရမယ့် ကျောင်းသွားချိန်လေးကို အခု မစောင့်နိုင်တော့ဘူး ချက်ချင်းရောက်ချင်ပြီ….အား။
Alex Aung (16 Sep 214)